Yaa ka dambeeyay dilkii loo geystay Almaas Elman? | YoobsanNews.com
Dad badan ayaa wali is weydiinaya qofkii ka dambeeyay dilkii Alle ha u naxariistee Almaas Elman Axmed oo Shalay u geeriyootay xabad madaxa uga dhacday, iyadoo ku sugan gudaha Xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho.
Almaas Elman waxay ka soo jeedaa qoys caan ka ah dunida oo lagu yaqaano gargaarka iyo wacyi gelinta. 23 sano kadib Geerida aabaheed ayaa iyadana lagu dilay Muqdisho si xaq darro ah.
Sidoo kale waxaa la dilay 24 saac kadib markii walaasheed Ilwaad ee Qaramada Midoobay ka sheegtay in Soomaaliya ay ku jirto xaalad soo kabasho ah islamarkaana uu soo hagaagayo amniga dalka.
Almaas Elman waxay kamid ah qoys ka kooban 3 Gabdhood iyo Hooyadood oo ifka uga tagay Alle ha u naxariistee Elman Axmed oo la dilay bishii March sanadkii 1996dii.
Caruurtii uu ka tagay oo ay kamid Almaas waxay noqdeen kuwa Soomaalida ka tilmaaman waxayna kala yihiin, Ilwaad oo nabada u olaleysa una sharaxay Shahaadada Nopal Peace Price, Iimaan Elman oo ka tirsan Saraakiisha Xoogga dalka iyo Alle ha u naxariistee Almaas oo soo noqotay Xoghaya 1aad ee Safaaradda Soomaaliya ee Kenya hadana qaybta warbaahinta u qaabilsaneed Midowga Yurub.
Taliyaha Ciidamada Booliiska Soomaaliya Gen Cabdi Xasan Xijaar ayaa sheegay in dowladda ay baari doonto dilka Almas ayna shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonaan natiijada baaritaanka.
Almas Elman waxay kamid noqotay dad badan oo hal door u ah Bulshada Soomaaliyeed oo si xaq darro ah loo dilay ilaa hadana aanan helin cadaalad lkn ma noqon doontaa qofkii ugu dambeeyay ee xaq darro loo dilo ?
Previous: Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa “ waa in wax laga qabtaa amni darada degmada Afgooye..
Next: Pentagonka mareykanka oo sheegay in ay been tahay Kuuriyada Koonfureed ciidamadiisa kala baxayo..